Iskuul ku yaala Maraykanka oo la weeraray
By Xaqiiqa Times / in Wararka Maanta / on Wednesday, 08 May 2019 12:03 PM / 0 Comment / 46 views
Sida ay laga soo xigtay Wakaaladda Wararka ee AP, madaxda ciidanka booliiska gobolka Colorado ee dalka Maryakanka ayaa sheegay in labo qofi ay ku dhaawacantay weerar toogasho ah oo ka dhacay dugsi ku yaalla magaalada Highlands Ranch.
Xafiiska Sheriffka ee degmada Douglas oo ay magaaladani ka tirsan tahay ayaa sheegay in askartu ay baadi goob ugu jirto qofkii ama dadkii wax toogtay, iyaga oo xaaladda ku sheegay mid wali khatarteedu jirto.
Toogashada ayaa ka dhacday dugsiga sare ee lagu magacaabo STEM, kaas oo ay dhigtaan tiro ka badan 1,850 arday, kuwaas oo ka kooban xadaanad iyo fasalada dugsiga sare.
Xafiiska Shariffka ayaa sheegay askartu ay gurmadeen iskuula saacadda markay ahayd 1:50 duhurkii, kaas oo 24km koonfur kaga beegan magaalada Denver.
Baabuurta dam-damiska, baabuurta gurmadka degdegga ah iyo baabuurta ciidanka booliiska ayaa goobta lagu arkayey. Waxaa kale oo la arkayey helicopterada gargaarka caafimaadka loogu talo galay oo ku soo degaya garoomada cagaaran ee iskuulka.
Shariffka ayaa waalidiinta ku jiheynayey xarun caruurta lagu hayey, si u qaataan.